Shaqo la'aan, dhibaato aad u xun oo ka jirta Talyaaniga | Dhaqaalaha
El dhibaatada shaqo la'aanta waa caqabadda ugu weyn ee hortaagan dowladda hadda talyaaniga ah. Intii lagu gudajiray dhaqdhaaqa dhaqaale ee wadanka transalpine uu maalmahan ka jiro, tirada shaqa la'aantu waxay kor u qaadeysaa codka qeylo dhaanta ah. Rubucii ugu horreeyay ee 2014, heerka shaqo la'aanta ayaa durba gaadhay 13,6%, kuwa ugu badan ee ay saameysay waa dhalinyarada da'doodu u dhaxayso 15 iyo 24 sano. Qeybta dambe, shaqo la'aanta waxay mareysaa 46%.
Xukuumadda Ra'iisul Wasaaraha, Matteo Renzi, ayaa la soo bandhigay bishii hore dib-u-habeyn shaqaale si loo yareeyo heerarkan shaqo la'aanta iyadoo la soo bandhigayo dabacsanaan ballaaran oo ku saabsan shaqada ku-meel-gaarka ah. Ujeedada sharcigan ayaa ah in la wanaajiyo sharciga la ansixiyay kaliya labo sano ka hor dowladdii Mario Monti.
Bishii Abriil 2013, Monti waxaa beddelay Enrico Letta, horraantii 2014 Renzi ayaa yimid. Dhamaantood waxay qeexeen shaqo la'aanta inay tahay dhibaatada ugu daran ee soo wajahda Talyaaniga. Si kastaba ha noqotee, talaabooyinka ay ilaa iyo hada qaadeen dowladahooda si ay u kiciyaan shaqada ayaan keenin natiijooyinkii la rabay.
Khubarada maxalliga ah ayaa horey dhowr jeer u iftiimiyay in sababaha ay qayb weyn oo ka mid ah dadka Talyaanigu shaqo la’aan u yihiin aysan ahayn wax fudud oo laga heli karo sharciyada shaqaalaha. Xididdadiisu aad bay uga qoto dheer yihiin sida ay u malaynayaan siyaasiyiinta Talyaanigu.
Heerka shaqo la'aanta Talyaaniga waxay ka sareysaa dhamaanba dhaqaalaha daciifka ah ee aan dalban shaqaalaha. Adiga oo aan sii socon, astaamaha yar ee ugu dambeeyay ee horumarka dhaqaalaha, oo ay ku jiraan kororka tusmada kalsoonida macaamiisha Bishii May ee la soo dhaafay, weli ma keenin hoos u dhac ku yimid shaqo la’aanta.
Waxsoosaarka guud ee Talyaaniga ayaa hoos udhacay 0,1% rubacii seddexaad ee sanadkii hore, kadib markuu kordhay 0,1% rubuca soosocday wuxuuna markale hoos udhigay 0,1% bilawgii 2014. Fadhiidnimadan ayaa sababa, iyo waxyaabo kale, in qofna uusan jirin runtii wuu heli karaa xalka sixirka si loo tirtiro shaqo la'aanta. Kobaca dhaqaaluhu aad ayuu u liitaa, markaa hadda waxa lagama maarmaanka ahi waa in la bixiyo himilo cusub muddada gaaban.
El dowladdii Matteo Renzi ayaa dejisay qorshe dib u habeyn hami leh oo dib loogu howlgelinayo dhaqaalaha. Hadda waxaa jira khatar aad u weyn oo ah in hiwaayaddan cusub aysan awoodi doonin inay joojiso dhiig baxa shaqo la'aanta. Haddii isbeddelku ku sii socdo heerkan, sannadka 2020 waxaa lagu qiyaasaa in heerka shaqo la'aanta ay haddaba noqon karto ilaa 37%. Masiibo dhab ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Dhaqaalaha guud » Shaqada » Shaqo la’aan, dhibaatada weyn ee ka jirta Talyaaniga
Shirkadaha ajaanibta ah ee ku sugan Spain ayaa rajo wanaagsan ka qaba dhaqaalaha wadanka